बिटकोइन के हो? सबैभन्दा मंहगो मुद्रा बिटकोइनको बारेमा जानिराख्नुस् | मेरो कलम
इन्टरनेटमा बिटकोइनको बारेमा धेरै चर्चा भएको पाइन्छ तर खासमा बिटकोइन भनेको के हो? यो कस्तो खालको मुद्रा हो भन्ने तपाइलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ! सरल भाषामा बिटकोइन भनेको एक डिजिटल मुद्रा हो जुन कम्प्यूटरको माध्यमबाट कारोबार हुन्छ ।
यसलाई हाम्रो खल्तिमा हुने पैसा जस्तो छुन र घरमा राख्न सकिन्न । इन्टरनेटको माध्यमबाट कारोबार गर्न मिल्ने (क्रिप्टोकरेन्सी) मुद्रा बिटकोइनको अविष्कार सन् २००९ मा सातोशी नाकामोटोले गरेका हुन् । नाकामोटो जापानी नागरिक भनिए पनि उनको परिचय अझैसम्म खुल्न सकेको छैन ।
नेपाली रुपैयाँ नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा मान्यता प्राप्त मुद्रा हो भने बिटकोइन कुनै पनि सस्था एवं सरकारद्धारा नियन्त्रित मुद्रा होइन । यो पूर्णरुपमा उपभोक्तामा निर्भर मुद्रा हो ।
यसको मुल्य कति छ?
बिटकोइन पनि मुद्रा भएकोले यसको पनि मुल्य छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा मंहगो मुद्रा पनि हो । यो ब्लग पोस्ट गर्दाको समयमा एक बिटकोइनको मुल्य ६ लाख बढी नेपाली रुपैयाँ हुन आउछ । यसको मुल्य दैनिक उच्च गतिमा बढ्ने क्रममा छ । एक सय पैसाको एक रुपैयाँ भएजस्तै एक बिटकोइन हुन एक अरब सतोशी हुनुपर्छ । सतोशी बिटकोइनको सबैभन्दा सानो इकाई हो ।
कसरी बिटकोइन बन्छ?
माइनिङ अर्थात कम्प्यूटरबाट उत्खनन् गरेर बिटकोइन उत्पादन गरिन्छ । यो उत्पादन गर्न इन्टरनेट, कम्पयूटर र विद्युतको प्रयोग गरिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको सीमामा रहेर पैसा छाप्ने भएजस्तै यसमा पनि २ करोड १० लाख भन्दा बढी बिटकोइन उत्पादन गर्न सकिदैन ।
हालसम्म करिब १ करोड ७० लाख बिटकोइन उत्पादन भइसकेको छ । बिटकोइन उत्खनन गर्न शक्तिशाली कम्प्यूटर, इन्टरनेट र उच्च क्षमताको विद्युत आवश्यक हुन्छ । कसरी बिटकोइन माइनिङ हुन्छ? भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ:
यसको फाइदा के कस्तो छ?
बिना झन्झट बिटकोइनको कारोबार संसारभर गर्न सकिन्छ । यसको मुल्य नियमित उकालो लागिरहेकाले यसमा लगानी गर्नेहरुले अन्य क्षेत्रमा भन्दा चाडो कमाउन सक्छन् । यसको कारोबार अनलाइनबाट हुने हुँदा सरकार एवं कुनै पनि निकायले नियमन गर्न सक्दैन ।
यसको बेफाइदा के कस्तो छ?
कुनैपनि बैंक एवं सरकार बिटकोइनप्रति जिम्मेवार नरहेकाले जुनसुकै समयमा यसको मुल्य कम हुनसक्छ र त्यसबाट हुने क्षतिको भागिदार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंम हुनुपर्छ ।
नेपालमा बिटकोइन किन अबैध छ?
नेपालमा बिटकोइनको कारोबार अबैध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विं स. २०६४ साउन २९ गते प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गररै बिटकोइन कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको बताइसकेको छ । नेपालमा मात्र नभएर अन्यदेशहरु जस्तै बगंलादेश, भियतनाम, आइसल्याण्ड, बोलिभिया जस्ता देशमा यसको प्रयोग गैरकानुनी छ ।
बिटकोइन कारोबार अज्ञात हुने र अनुगमन असम्भव हुने हुँदा यसको कारोबारलाई रोक लगाइएको हुनसक्छ । साथै अर्को कारण कालो धन बिटकोइनमा लगानी गरेर अन्य देशमा लैजान सहजै सकिने हुँदा पनि यसको कारोबार बैध नभएको हुनसक्छ ।
कर छली, लागुऔषध, तस्करी जस्ता अपराध बढ्न सक्ने डरले पनि नेपालमा बिटकोइनको कारोबार अबैध गरिएको हुनसक्छ ।